ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကို ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟု ထင်ပါသလား - Hello Sayarwon
ခွဲစိတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကို ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟု ထင်ပါသလား။
ဆေးသိပ္ပံပညာမထွန်းကားခင်က ရှေးခေတ်ဆရာဝန်များ လူနာတွေကို ဘာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့လည်းဆိုတာကို သိတဲ့အထိ
နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာတုန်းက လူအများဟာ ခနာကိုယ်မှာအရာ 4ခုပဲပါတယ်ဆိုပြီး ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဝါရောင်သည်းခြေရည်၊အမည်းရောင်သည်းခြေရည်၊phlegm နှင့်သွေးရည်တို့ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တွင်းရှိသွေးများမကောင်းလျှင် နေမကောင်းဖြစ်တတ်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
ရောဂါအတော်များများကို သွေးများပိုလျှံနေခြင်းကြောင့်ဟု အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်
ဖြေရှင်းမှုကလည်း တော်တော်ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်တွင်သင့်ကိုနေမကောင်းဖြစ်စေသည့် သွေးများမြောက်မြားစွာရှိနေပါက
သင့်သွေးပြန်ကြောကို ဖောက်ပြီး ထိုမကောင်းဆိုးဝါးသွေးများကိုဖောက်ထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်သွေးသည် ထွက်တာနှေးနေပါက အထောက်အကူပြုစေမယ့် သွေးစုပ်သည့် မျှော့များကို အသုံးပြုပါတော့တယ်။
ယခုအချိန်တွင် သိပ္ပံပညာကို ကျေးဇူးတင်ရပေမည်။ ကျွန်တော်တို့သွေးတွေ ဖောက်ထုတ်ခံရပါက ဘာဖြစ်မည်ကို ကျွန်တော်တို့သိကြ၍ဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုသို့သွေးဖောက်ထုတ်ကုသခြင်းကိုလည်ချောင်းနာသည်မှ အစ ပလိပ်ရောဂါအဆုံး ရောဂါအမြောက်အမြားမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပြီး
သေဆုံးမှုအများအပြားသည်လည်း သွေးဆုံးရှံူးမှုများကြောင့် ဖြစ်သွားသည်။
Trepanning သည် လူသားသမိုင်းတွင် ရှေးအကျဆုံးခွဲစိတ်မှုဖြစ်နိုင်ပြီး ထိုခွဲစိတ်မှုတွင် ဦးခေါင်းခွံရိုးကို အပေါက်များဖောက်ကာ ရောဂါများကို ကုသကြသည်။ ထိုရှေးခေတ်သမားတော်များသည် လူနာများတွင် မကောင်းဆိုးဝါးများကပ်တွယ်နေသည်ဟု ယူဆ၍ ခံစားနေရသောဝေဒနာများမှ
လွတ်မြောက်ရန်ထိုမကောင်းဆိုးဝါးများကို ဦးခေါင်းခွံအတွင်းမှ အပေါက်ဖောက်ပေး၍ထုတ်ပေးသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြဟန်တူသည်။
အချို့သောယခုခေတ်သိပ္ပံရှင်များက ထိုသို့ပြုလုပ်မှုအား ထိုခေတ်က အတက်ရောဂါ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပြည်တည်နာများ၊သွေးခဲများနှင့်
ခေါင်းအားထိခိုက်မှုကြောင့်ကျိုးကျေသွားခြင်းတို့အား ယခုခေတ်ဆရာဝန်များကုသသည့်အတိုင်း ကြိုးစားကုသခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု
အမှန်တွင် ထိုကြောက်မက်ဖွယ်ကုသမှုများဖြင့် လူနာအများစုအသက်ရှင်လာကြပြီး သူတို့၏ဖြစ်ပျက်ပုံများကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်ပြောပြနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မာကျူရီ ကို ရှေးခေတ်အခါက တစ်ခုတည်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောကုသမှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အသက်ရှင်နိုင်စွမ်းနှင့် သက်တမ်းကို ချဲ့ကားနိုင်ဖို့ပင်ယူဆ၍ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မာကျူရီအရည်သာမကမာကျူရီဆာလ်ဖိုက်ကိုပါ မှော်ဆေးတစ်လက်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့ကြပြီး အချို့လူများသည်
မာကျူရီ၊ဆာလ်ဖာနှင့် အာဆင်းနစ်တို့စပ်ထားသည့်အရည်အချို့ကို ထာဝရရှင်သန်နိုင်ရန်နှင့် ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်နိုင်ရန် သောက်သုံးခဲ့ကြသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် ထိုလုပ်ဆောင်မှုသည် အဆင်မပြေခဲ့ပဲ တရုတ်အင်ပါယာပြည့်ရှင် ကွင်ရှီဟောင်ကိုယ်တိုင်သည်
မာကျူရီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဆေးလုံးများကို ထာဝရအသက်ရှင်ဆေးအဖြစ်မှတ်ယူစားသုံး၍ သေဆုံးခဲ့ဖူးသည်။ မာကျူရီအား လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ
ထိုသတ္တုများသည် ရောဂါပိုးများကို တိုက်နိုင်သော်လည်း လူနာအများစုသည် မာကျူရီ၏ ထိရောက်မှုကို မနှစ်သက်ကြပေ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်သည် မာကျူရီကြောင့်ပျက်စီး၍ သေဆုံးနိုင်၍ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင်ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ သေဆုံးမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ကာလသားရောဂါပိုး သင့်တွင်ရှိမနေပါ။
7 Unusual Ancient Medical Techniques. http://www.history.com/news/history-lists/7-unusual-ancient-medical-techniques. Accessed April 27, 2017.